Gịnị Ka M Ga-eme ma Ọ Bụrụ na Ihe M Anaghị Amasị Ndị Ọzọ? | Ndị Na-eto Eto Na-ajụ, Sị
GỤỌ NKE Afrikaans Albanian American Sign Language Amharic Arabic Arabic (Lebanon) Armenian Azerbaijani Belize Kriol Bicol Bislama Brazilian Sign Language Bulgarian Catalan Cebuano Chichewa Chilean Sign Language Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitumbuka Cibemba Croatian Czech Dangme Danish Dutch Efik English Estonian Ewe Faroese Fijian Finnish Fon French Ga Georgian German Greek Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hungarian Iban Icelandic Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Italian Sign Language Japanese Javanese Kabuverdianu Kannada Kikamba Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Korean Kurdish Kurmanji (Caucasus) Kurdish Kurmanji (Cyrillic) Kwanyama Kyangonde Lingala Lithuanian Macedonian Malagasy Malay Malayalam Mexican Sign Language Myanmar Ndebele (Zimbabwe) Nepali Niuean Norwegian Nzema Okpe Oromo Ossetian Pangasinan Papiamento (Curaçao) Persian Polish Portuguese Portuguese (European) Punjabi Punjabi (Roman) Quichua (Imbabura) Rarotongan Romanian Russian Russian Sign Language Samoan Sango Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Sesotho (South Africa) Setswana Seychelles Creole Shona Sinhala Slovak Slovenian Solomon Islands Pidgin Spanish Spanish Sign Language Sunda Swahili Swahili (Congo) Swedish Tagalog Tamil Tarascan Tatar Telugu Tetun Dili Thai Tigrinya Tiv Tsonga Turkish Turkmen Twi Tzotzil Ukrainian Urdu Urhobo Uzbek Uzbek (Roman) Valencian Vietnamese Waray-Waray Welsh Yoruba
“I kwesịrị ịgbalị na-eme ka ibe gị, ma ọ̀ bụghị ya, ị gaghị enwe ndị enyi, ndụ agaghị na-atọ gị ụtọ, ihe agaghịkwa agaziri gị. O nweghị onye ga na-eche banyere gị, owu ga na-amakwa gị.”—Carl.
Ihe a o kwuru, ọ̀ bụ eziokwu? Ọ bụchaghị eziokwu. Ma, ụfọdụ ndị ga-eme ihe ọ bụla ka ihe ahụ Carl kwuru ghara ime ha. Gịnị ka gịnwa ga-eme? Isiokwu a ga-enyere gị aka ịma otú ka mma ị ga-esi emeta ndị enyi.
Gịnị mere ndị mmadụ ji agbalị ka ihe ha na-amasị ndị ọzọ?
N’ihi na ha achọghị ka ndị ọzọ jụ ha. “Mgbe m gara n’Ịntanet, ahụrụ m foto ụfọdụ ndị enyi m sere mgbe ha mere mkpapụ, ma ha akpọghị m. Nke a mere ka m na ajụ onwe m ma è nwere ihe na-eme m. Naanị ihe obi m gwara m bụ na ihe m anaghị amasị ha ma ọ bụkwanụ na ha achọghị ka mụ na ha na-anọ.”—Natalie.
IHE Ị GA-ECHEBARA ECHICHE: Ọ̀ dịtụla mgbe ọ dị gị ka ụfọdụ ndị hà jụrụ gị ajụ? Ò nwere ihe i mere ka ha nwewe mmasị n’ebe ị nọ? Gịnị ka i mere?
N’ihi na ha achọghị ịdị iche n’ebe ndị ọzọ nọ. “Ndị mụrụ m ekweghị azụrụ m ekwentị. Ọ na-abụ ụmụaka ibe m jụọ m nọmba ekwentị m, m na-agwa ha na enweghị m ekwentị. Ọ na-agbagwoju ha anya, ha ajụọ m, si: ‘Ị̀ sị gịnị? Ị̀ ka bụ taata?’ M gwa ha na adị m afọ iri na atọ, ha emetewere m ebere.”—Mary.
IHE Ị GA-ECHEBARA ECHICHE: Olee ihe nne na nna gị ga-asị gị emela nwere ike ime ka i chee na ị gbapụrụ iche n’ebe ndị ọzọ nọ? Olee ihe ị ga-eme?
N’ihi na ha achọghị ka ndị ọzọ na-achọ ha okwu. “Ụmụ akwụkwọ ibe m anaghị enwekarị mmasị n’ebe onye àgwà ya dị iche na nke ha nọ, onye na-anaghị ekwu okwu otú ha si ekwu, nakwa onye ha na ya na-anaghị ekpe otu okpukpe. Ha chọpụta na ị dị iche, ha nwere ike ịchọwa gị okwu.”—Olivia.
IHE Ị GA-ECHEBARA ECHICHE: Ò nwetụla mgbe a chọrọ gị okwu n’ihi na ị dị iche? Gịnị ka i mere mgbe ahụ?
N’ihi na ha achọghị ka ndị enyi ha hapụ ha. “M na-agbalị ka m na-eme ihe otú ibe m si eme, na-ekwu okwu otú ha si ekwu ma na-eso ha na-achị ọchị mgbe ihe mere ha ji achị ọchị atọghị m ọchị. M na-esokwa ha mgbe ha na-achị ndị mmadụ ọchị, ọ bụ eziokwu na m makwa na ọ ga-ewute onye ahụ.”—Rachel.
IHE Ị GA-ECHEBARA ECHICHE: Ọ̀ na-agụsi gị agụụ ike ka ndị ọgbọ gị nwee mmasị n’ebe ị nọ? Ò nweela mgbe ị gbanwere otú i si ekwu okwu ma ọ bụ otú i si akpa àgwà naanị ka ị ghara ịgbapụ iche?
Ime ka ndị ọzọ naanị ka ị ghara ịdị iche nwere ike ịkụ gị ahịa. Maka gịnị? N’ihi na ndị mmadụ na-achọpụtakarị na ihe ahụ esighị gị n’obi. Otu nwa okorobịa dị afọ iri abụọ aha ya bụ Brian kwuru, sị, “M mewa ka ụmụ klas ibe m ma mụ na ha nọrọ, m ka na-agbapụtụkwa iche. M chọpụtara na ọ kacha mma ime ihe otú m si eme ihe n’ihi na ndị ọzọ ga-ama na m na-achọ ime ka onye ọzọ.”
IHE KA MMA Ị GA-EME: Chebara ihe ka gị mkpa echiche. Baịbụl kwuru, sị: “Chọpụta ihe ndị ka mkpa.” (Ndị Filipaị 1:10) Jụọ onwe gị, sị, ‘Gịnị ka mụ mkpa? Ọ̀ bụ ịgbalị mewe ihe otú ndị ọzọ si eme ka m ghara ịdị iche, ka ọ̀ bụ ịnọ na-eme ihe otú m si eme?’
“Ịgbalị imewe ka ndị ọzọ agaghị abara gị uru. Ọ gaghị eme ka ndị mmadụ hụkwuo gị na anya, ma ọ bụkwanụ mee ka ị ghọkwuo ezigbo mmadụ.”—James
Ịchọ ịdị ka ibe gị nwere ike ime ka ndị ọzọ na-atụrụ gị ụka. O nwere ike ime ka ị bụrụ onye na-eme ihe ọ bụla ndị ọzọ sịrị gị mee iji mee ka ha nwewa mmasị n’ebe ị nọ. Otu nwa okorobịa aha ya bụ Jeremy, sịrị: “M na-emebu ihe ọ bụla m nwere ike ime ka m ghara ịdị iche n’ebe ndị ọzọ nọ, n’agbanyeghị ma ọ̀ ga-eme ka a kpọwa m aha ọjọọ. O mere ka ndị ọzọ na-atụrụ m ụka. M na-eme ihe ha chọrọ, na-ekwukwa ihe ha chọrọ.”
IHE KA MMA Ị GA-EME: Mara ihe i kwesịrị ime ma na-eme ya eme, kama ime ka ogwumagala na-abụ ya hụ ụcha ya achaa ụcha, ya ahụ ojii ya ejie oji. Ọ bụ ya mere Baịbụl ji kwuo, sị: “Emela ihe naanị n’ihi na onye ọ bụla na-eme ya.”—Ọpụpụ 23:2, Holy Bible—Easy-to-Read Version.
“M gbalịrị nwewa mmasị n’ihe niile na-amasị ndị enyi m, ma egwú, egwuregwu, ejiji, fim na ihe ndị ha ji achọ mma. . . . M gbalịrị ịdị ka ha. Echere m na ha ma na ihe ndị a m na-eme esighị m n’obi. Ma mụ ma ndị ọzọ makwa na m na-ejije ndị ọzọ. O mechara mewe m obi ọjọọ, owu ana-amakwa m, amaghịzi m onwe m. Amaghịkwa m ihe m chọrọ achọ. Abịara m mụta na ọ bụghị mmadụ niile ị hụrụ ka ihe ga-adabara gị na ha, ọ bụghịkwa ha niile ka ihe gị ga-amasị. Nke a apụtaghị na ị ga-akwụsị imeta ndị enyi. Naanị ihe ọ chọrọ gị n’aka bụ inwe ndidi. Cheta na imeta ezigbo ndị enyi na mmadụ ịma nke a na-akọ na-ewe oge.”—Melinda.
Ịchọ ịdị ka ibe nwere ike ime ka ị kpawa àgwà ọjọọ. Otu nwa okorobịa aha ya bụ Chris chọpụtara na ihe mere otu onye ikwu ha gosiri na ihe a bụ eziokwu. Chris kwuru, sị: “Ọ malitere ime ihe ọ na-anaghị emebu, dị ka ịṅụ ọgwụ ike, naanị ka ọ ghara ịdị iche. Ọgwụ ike bịara rie ya ahụ́, ọ fọkwara obere ka ọ taa isi ya.”
IHE KA MMA Ị GA-EME: Gbaara ndị okwu ọnụ ha na omume ha na-adịghị mma ọsọ. Baịbụl kwuru, sị: “Onye ya na ndị maara ihe na-eje ije ga-ama ihe, ma ihe agaghị agaziri onye ya na ndị nzuzu na-emekọ ihe.”—Ilu 13:20.
“Mgbe ụfọdụ, ọ na-adị mma ime ihe ga-eme ka ị ghara ịdị iche n’ebe ndị ọzọ nọ. Ma i kwesịghị ime ya ma ọ bụrụ na ọ ga-eme ka i mee ihe na-adịghị mma. Ndị bụ́ ezigbo mmadụ ga-emeta gị enyi n’ihi àgwà ọma gị.”—Melanie.
Aro: Ị chọọ imeta ndị enyi, achọla naanị ndị ihe na-amasị gị na-amasị. Chọọ ndị ji ofufe Chineke kpọrọ ihe ma na-akpakwa àgwà ọma ka gị.
Ọ bụghị ákwà niile ga-adị gị mma n’ahụ́. Otú ahụkwa ka ọ na-abụghị mmadụ niile ga-eme ka ị bụrụ ezigbo mmadụ
“Ọ bụrụ na o nwere ndị na-achọghị ka gị na ha na-akpa, o nwere ike ịdị mma ka i chee echiche ihe kpatara ya. Ihe kpatara ya, ọ̀ bụ n’ihi na ha anaghị akpa àgwà ọma ka gị? Ya bụrụ otú ahụ, obi kwesịrị ịdị gị ụtọ na ha ekweghị ka gị na ha dịrị ná mma.”—Emma.
“Kama ịnọ na-echegbu onwe gị gbasara otú ị ga-esi ghara ịdị iche, ọ ga-aka mma ka i jiri oge ahụ mụtakwuo àgwà ọma ndị ga-eme ka ị bụrụkwuo ezigbo mmadụ. Ọ bụrụ na ị na-emere ndị ọzọ ihe ọma, ndị ahụ ị chọrọ ka gị na ha bụrụ enyị ga-emeta gị enyi.”—Noah.
“Otú m si emeta ndị enyi bụ igosi ndị ọzọ na m nwere mmasị n’ebe ha nọ. M na-achọpụta ihe na-amasị ha na otú ha si ele ihe anya. Kama ịgbanwe otú m si eme ihe, m na-aghọta na otú ndị ọzọ si ele ihe anya nwere ike ịdị iche na nke m. Nke a emeela ka mụ na onye ukwu na onye nta bụrụ enyi.”—Dominique.
Ihe ị ga-eburu n’uche: Gịnị ka m ga-eme ma ọ bụrụ na ihe m anaghị amasị ndị ọzọ?
Chebara ihe ka gị mkpa echiche.
‘Gịnị ka gị mkpa? Ọ̀ bụ ịgbalị mewe ihe otú ndị ọzọ si eme ka ị ghara ịdị iche, ka ọ̀ bụ ịnọ na-eme ihe otú i si eme?’
Gbalịa mụtakwuo àgwà ọma, ekwekwala ka ihere na-eme gị maka ya.
Aghọkwala ogwumagala na-abụ ya hụ ụcha ya achaa ụcha, ya ahụ ojii ya ejie oji.
Gbaara ndị okwu ọnụ ha na omume ha na-adịghị mma ọsọ.
Mgbe ụfọdụ, ọ na-adị mma ime ihe ga-eme ka ị ghara ịdị iche n’ebe ndị ọzọ nọ. Ma i kwesịghị ime ya ma ọ bụrụ na ọ ga-eme ka i mee ihe na-adịghị mma.
Otú Anyị Si Emeso Ndị Ọzọ Ndị Na-eto Eto Na-ajụ, Sị Ndị Na-eto Eto
Ole Ndị Bụ Ezigbo Ndị Enyi M?
Zigara Ya Onye Ọzọ Zigara Ya Onye Ọzọ Gịnị Ka M Ga-eme ma Ọ Bụrụ na Ihe M Anaghị Amasị Ndị Ọzọ?
ijwyp isiokwu 91